ပင်လယ်ထဲက မြစ်များ… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Entertainment » ပင်လယ်ထဲက မြစ်များ…
Posted by ကို ထွဋ် on Jul 4, 2014 in Entertainment, Music | 8 comments
တခွေလုံး နီးပါးကို ကြိုက်တယ်.. ပထမ အခွေတုန်းကတော့ မကြိုက်တာတောင် ပါသေးတယ်…
ဒီတခွေက နားထောင်တာတောင် နောက်ကျတယ်… ထွက်ပြီး တလကျော်မှ နားထောင်ဖြစ်တာ..
စ နားထောင်ထောင်ချင်းပဲ သဘောကျသွားတယ်… အပြစ်မဲ့လူသားတဲ့.. Metal ဆန်တဲ့ Crush တွေ စာသားတွေနဲ့ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ သီချင်းတပုဒ်ပဲ…
နောက်တပုဒ်ကတော့ Animation X ဟန်ထူးလွင် နဲ့ဆိုထားတာ.. English Version ပေါ့.. သိပ်တော့ မဆိုးလှဘူး..
ကွက်လပ်၊ ငါ့ကိုသတိရပါ၊ မှားခဲ့လား၊ အဆင်ပြေမှာပါ၊ အလွမ်းသည်၊ ခံစားချက် ဒါတွေကတော့ မိန်းကလေး အင်အားစု ကြိုက်တဲ့ အလွမ်းသီချင်းအေးအေးလေးတွေပေါ့…
ကျွန်တော်လဲ ကြိုက်ပါတယ်… မှားခဲ့လားဆို အကြိုက်ဆုံးပဲ… ငါ့ကို သတိရပါတို့ အလွမ်းသည်တို့ရောပေါ့… အဆင်ပြေမှာပါဆို တီးတာလေးက တမျိုးဆန်းတယ်ဗျ.. မိုက်တယ်ပြောရမလားပဲ… ကြားနေကျပုံစံ
စက်ရုပ်ကမ္ဘာ၊ ဘောင်၊ For The Moment တို့ဆိုရင် လမ်းရိုးလမ်းစဉ်ကနေ ခွဲထွက်တဲ့ ပုံစံလေးတွေပါပဲ… အစက အေးမလိုနဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ Crush လေးတွေ ပါးပါး သုံးထားတာ အရမ်းသဘောကျတယ်….
ဘောင် နဲ့ For The Moment ဆို အရမ်း ကို သဘောကျတယ်… တော်တော်လေးကို မိုက်တာဗျ.. Post Modern ပုံစံလေးတွေ သဘောကျရင် နားကို ထောင်သင့်တဲ့ သီချင်းတွေပါပဲ…
ထူးခြားချက်အနေနဲ့.. Instrumental ချည်းသပ်သပ် တပုဒ်ပါပါသေးတယ်… Unabsent-Minded Maze(Instrumental)…
အကြိုက်ဆုံး… နားထောင်ထောင်ချင်း နောက်တခေါက်ထပ်နားထောင်ကို ထောင်ဖြစ်တာက… Title Song ပင်လယ်ထဲက မြစ်များပါပဲ.. အကြိုက်ဆုံး အဆိုတော် တယောက်လဲ တွဲပြီး ဆိုထားပါသေးတယ်…
သူကတော့ မျိုးကြီးပါ… သီချင်းကလဲ ရှည်ပါတယ်.. ၆ မိနစ်ကျော်တယ်.. သီချင်းပြီးလို့ နောက်ပြီး အော်တာက ပိုကြာသလိုပဲ… အဲဒါတွေကို သဘောကျတာလဲပါတယ်…
IC မှာဆို Backing တို့ ဟာမိုနီတို့ဆို မျိုးကြီးက အပိုင်ဆုံးပဲ… ဒီလိုပဲ SIR မှာဆိုရင် အောင်လက အပိုင်ဆုံး… သူတို့၂ ယောက်ပေါင်းလိုက်တော့ မျက်နှာကို ပြောင်နေတော့တာပဲ….
နားထောင်ကြည့်စေချင်ပါတယ်.. အခုဆို ထွက်တာမှ အဆိုတော်တွေ စုံနေတာပဲ… စန္ဒီမြင့်လွင် ရဲ့ ကလီယိုပက်ထရာ၊ ချမ်းချမ်းရဲ့ အိမ်မက်၊ အေသင်ချိုဆွေရဲ့ Play Boy၊ မိစန္ဒီရဲ့ ပစ်တိုင်းထောင်၊
လွှမ်းပိုင်ရဲ့ ဂီတစာဆို တော်တော်များများပါတယ်… အခုလက်ရှိ အကြိုက်ဆုံးကတော့ အခု အောင်လ ရဲ့ ပင်လယ်ထဲက မြစ်များ တေးစီးရီးပဲ ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာ သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါတယ်….
အောင်လ နဲ့ ဒီည တွေ့ပြီ။
သူ့ ဗီဒီယို ခွေ ကြည့်မို့ပြောတာပါ။
ခု ညွန်းတာ က နောက်ည နားထောင်ကြည့်မယ် ဆိုတော့…………………..
အောင်လ နဲ့ ၂ ညလောက်တော့ တွေ့ရဦးမှာပေါ့လေ၊
ဟုတ်လား.. သိတောင် မသိဘူးဗျ.. ဒါဆို ဒီည အခွေဆိုင် ဒိုးရမယ်… ကျေးဇူး.. ဇီဇီရေ… ကျွန်တော် စဉ်းစားတယ်… အယ်လ်ဘမ်အသစ်တွေကို ဒေါင်းလို့ ရအောင် ကိုယ်ပိုင်လင့်နော်.. ဒီမှာ တင်ပေးမလားလို့.. အဆင်ပြေရင် လက်ခုပ်သံလေး ကြားချင်ပါတယ်…
ရေမြေ့သနင်းရဲ့ တေးစီးရီးအညွှန်း ကို ကြိုဆိုပါတယ်ဗျ…။
နောက်လည်း စီးရီးအညွှန်းတွေ ကို ဖတ်ရမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်…။
အယ်လ်ဘမ် အသစ်တွေ ကို တင်ပေးမယ်ဆိုတာတော့…
မူပိုင်ခွင့် ကိစ္စကြီးက အားကောင်းလာပြီမို့ သတိလေး ထားစေချင်ပါတယ်…။
စီးရီးအညွှန်းကိုတော့ အမြဲတမ်းရေးဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ် ဗျာ…။
ဟုတ်.. အားပေးလို့ ကျေးဇူးတင်သလို သတိပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်… ဟဲ.. လာတော့လဲ လာတယ်ပေါ့.. ကိုယ့်အခွေသူများပေးနားထောင်တာပဲ.. တားလို့ရမလား.. :-) နောက်တာပါ.. ကျွန်တော် ကိုယ်ပိုင်လင့်နဲ့ တင်မှာပါ.. သူများဆိုက်ကဟာတွေကို ယူတင်မှာ မဟုတ်ပါ…
အခုဆို ခွေ ဆိုင် ဘက် မ ရောက် တာကြာပြီ
အဆိုတော်အသစ်တွေ ဘာတွေဆိုဘာမှ မသိဒေါ့ဘူး
စာပဲသဲသဲမဲမဲဖတ်နေ မိလို့ 
အခွေတွေကလဲ ပြောမနေပါနဲ့တော့.. ထွက်တာမှ ဆိတ်ချီးပါသလို တဖွတ်ဖွတ်နဲ့.. နားထောင်ရတာကို အလုပ်တလုပ်လို့ ဖြစ်နေတာ.. ဒါပေမဲ့ ကြိုက်တော့လဲ ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ… :-)
ဟုတ်.. ကြိုက်တဲ့ ကျွန်တော်တို့တောင် သိပ်နားမထောင်ဖြစ်ပါဘူးဗျ.. အချိန်ပေးနားထောင်နေရတယ်…ဒါပေမဲ့ အခု ဒီမှာ ပုံမှန် အညွှန်းတင်ရမယ်ဆိုရင်တော့ နားထောင်ရမှာပေါ့.. ပို့စ်တင်ဖို့က ကျွန်တော် ကျွမ်းတာဆို.. သီချင်းနားထောင်.. ကွန်ပြူတာပြင်.. မြေပွဲစားလုပ် ဒါပဲဆိုတော့ ကုန်ကြမ်းရှာရမယ်လေ… မတင်ရင် မနေမှ မနေနိုင်တာ.. ဟီး.. အုန်းကျွန်းဆိုတော့ အချိန်ပိုပေးရတယ်…